Iskuulada degmada 742 ayaa bixiya cuno caafimaad leh maalin kasta. Sanad dugsiyeedka 2018-2019, Qiimaha quraacda Iskuulada Hoose waa $ 1.60 iyo kharashka qadada oo ah $ 2.65. Qiimaha quraacda Iskuulada sare waa $ 1.60 iyo kharashka qadada oo ah $ 2.85. caano, qado qabow / qiimaha caano dheeraad ah, cuno fudud waa .45 dhamaan ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegin heerka xaaladda qadada ah.
Waite Park, MN 563387
Wixii macluumaad dheeraad ah ama su'aalo ah fadlan soo wac lambarkan: 320-370-8000.